ထိန်ထိန်ညီးတဲ့ မီးထွန်းပွဲတော်မှာ ananda (အနန္တ) နဲ့ ပိုမိုပြည့်စုံစွာဖြတ်သန်းကြမယ် | ananda
Home / သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ / ထိန်ထိန်ညီးတဲ့ မီးထွန်းပွဲတော်မှာ ananda (အနန္တ) နဲ့ ပိုမိုပြည့်စုံစွာဖြတ်သန်းကြမယ်
သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်တွင် hoco. ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရရှိနိုင်မည့်အခွင့်အရေး။
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ။ ။ ယခုနှစ်သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်ကာလတွင် ananda (အနန္တ) မှ hoco. ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ရှိ ပြည်သူလူထုနှင့် မီးထွန်းပွဲတော်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့အတွင်း ananda (အနန္တ) ၏ mifi သို့မဟုတ် router စက်များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုကြသော ananda (အနန္တ) သုံးစွဲသူများသည် ကြိုးမဲ့စပီကာ၊ နားကြပ်၊ Headphone နှင့် Power Bank များပါဝင်သော hoco. ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ၁၄ ခုထဲမှ တစ်ခုကို ကံစမ်းနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။
“သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်ဆိုတာ မြန်မာတွေအတွက် အရမ်းကိုအရေးပါတဲ့ ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထူးခြားတဲ့အခါသမယမှာ ananda (အနန္တ) က ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလိုက်ပြီး ခေတ်နဲ့အညီ ဖြတ်သန်း ချင်တဲ့ ananda (အနန္တ) သုံးစွဲသူတွေကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ ကံကောင်းခြင်းတွေ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်” ဟု ananda (အနန္တ) ၏ Branding and Communications အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မဆုမြတ်နိုးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကံထူးရှင်များကို ananda (အနန္တ) လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင် ကြေညာပေးသွား မည်ဖြစ်သည်။
ananda (အနန္တ) သည် အရည်အသွေးမြင့်၊ မြန်နှုန်းမြင့် 4G+ ဒေတာဝန်ဆောင်မှုကို တစ်ဦးချင်းသုံးစွဲသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်း လိုက်အသုံးပြုသူများကို ထောက်ပံ့ပေးစွမ်းလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလတွင် ရန်ကုန်၌ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သော ananda (အနန္တ) သည် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို မကြာမီကာလတွင် မန္တလေး၌ ဆက်လက် မိတ်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Amara Communications Co., Ltd အကြောင်း
Amara Communications Co., Ltd. (ACS) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် telecommunications ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ဦးဆောင်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) ကို ACS မှ ပိုင်ဆိုင်ကာ လုပ်ငန်းကို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) သည် တစ်ဦးချင်း၊ လုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့လိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သောအတွေ့အကြုံများကို ခံစားရ ရှိစေနိုင်မည့် 4G+ ဒေတာ အော်ပရေတာ (4G+ data-only operator) အဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒုတိယ သုံးလပတ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဝန်ဆောင်မှုများ စတင်ပေးခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့တွင် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင် ရန်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ananda (အနန္တ) သည် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အပြည့်အဝ ပိုင်ဆိုင်သည့် မြန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ် လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံ၏ အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော telecommunications ဈေးကွက်ကို ခြေလှမ်းအစပြုနိုင်ရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့သော ACS အနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ တာဝါတိုင်၊ စွမ်းအင်၊ ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစသည့် မိုဘိုင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ACS သည် ငွေဖြည့်ကတ် (top-up cards) များကို ဈေးကွက်အတွင်း ဖြန့်ချိသည့်လုပ်ငန်းကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ACS သည် လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှု၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်း နယ်ပယ်တို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်သော IGE လုပ်ငန်းစု၏ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်များပိုမိုသိရှိလိုပါက www.ananda.com.mm သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။
[email protected] [email protected]ricecomms.com
+၉၅ ၉ ၇၇၇ ၇၅၆ ၈၅၈ +၉၅ ၉ ၄၂၀ ၁၇၉ ၅၇၅